Madaxweyne Farmaajo Muxuu ku muteystay in Galmudug lagu soo dhoweeyo..? [Qormo] | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Madaxweyne Farmaajo Muxuu ku muteystay in Galmudug lagu soo dhoweeyo..? [Qormo]
Waxaan maalmahan Baraha Warbaahinta Bulshada ka arkaynay Farmaajo oo soo dhowayn aan caadi ahayn loogu sameeyey deegaanada Puntland taas oo lagu fasiri karo in lagu abaal marinayey tacadigii uu u geystay Beesha Habargidir.
Waxaase iswaydiin sababta keentay in siyaasiyiin iyo madaxda reer Galmudug ay deegaanka ku qulqulaan si ay u soo dhoweeyaan Farmaajo. Farmaajo wuxuu booqashadiisa u qosheeyey Puntland. Galmudug waxay u tahay lama huraan lugta sii mari ah. Wuxuu ku degey Waqooyiga Gaalkacyo, halkaas ayaa loogu yeeray.
Madaxdii Galmudug, Xaaf, Qaybdiid, Cweli Gorod, Wasiirkii Arrimaha Gudaha. Sawirada dadka soo dhowaynaya ay wateen waa Gaas iyo Farmaajo, Calanka Puntland ayaa la daba taagan yahay. Waxaa kaloo is waydiin mudan Farmaajo u qabtay reer Galmudug oo aan ka ahayn:-
1- In uu isku dayey inuu afganbiyo maamulka Xaaf hogaamiye ee Galmudug isaga oo adeegsanaya kooxo u dhashay deegaanka oo calooshood u shaqeystayaal ah.
2- In Dadkoodi ku xasuuqay Bariire ka dibna yiri waa argagixiso ilaa maantana uusan diyadoodii bixin.
3- Ma in uu weeraray Hoyga Siyaasi Cabdiraxman Cabdishakuur iskuna dayay khaarijintiisa.
4- Mise waxa uu ku muteystay amarkii uu ku baxshay in loo dhaco guriga Senotor Cabdi Qaybdiid, suuligana loogu dhaco Xaaskiisa, taasoo ah xadgudub iyo xaqiraad aan geed loogu ganbado laheyn.
Gafafkaas iyo kuwa kale oo badan ayay ree Galmudug ka tabanayaan Farmaajo inta yar oo aan sanadka dhamayn ee uu xilka haayay.
Hadaba madaxda maamulka Galmudug iyo siyaasiyiinta isku sii maqiiqaya soo dhowaynta Farmaajo uga jawaabayaan su’aalaha kore. Maxay u sheegayaan taageerayashaa iyo shacabka reer Galmudug ee lagu yaqaano gobonimada, sharafta iyo cisiga dadnimo. Jawaabta sow maaha.
Waa sharaf disheen dadkiina Soomaalina waxay horey u tiri
“NIN KU DILAY HOOS KUMA JIIDO”
W/Q: Cali Aadan Muumin
Qoraalkadda fekradaha kama tarmujayaan Goobjooge ee waxay gaar u yihiin qofka qoray.
Previous articleImaaraadka & Masar oo Xaalad dagaal geliyey dowladda Suudaan kadib heshiisyo ay la gashay Turkiga [Warbixin]
Next articleXOG: Xubnihii ugu weynaa Mucaaradka oo ku biiray soo dhoweynta Madaxweyne Farmaajo ee Galmudug